पाथिभरा माताले हामी गरुन हेर्नुहोस तपाइको आजको राशिफल – Kavrepati
सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ : हेर्नुहोस
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए
दर्शकले रुचाउनुभयो भने बोल्ड भूमिका पनि गर्छुः उपासना
उद्योगपति तथा कवि वसन्त चौधरीलाई ह्रदयघात
श्वेता खड्काको पैसा फिर्ता नगर्ने व्यवसायी पक्राउ
जर्मनबाट नेपाली प्रेमिकालाई भेट्न आएका नागरिक ठमेलमा मृत फेला
पुन्य गौतमले भुवन के सि लाई सिधा फोन गरेर सोधे महानायक वास्तवमा को हो ? भुवन,शिव वा राजेश ? जवाफ सुनेर पुन्य जिल्ल- भिडियो हेरौ
Home / राशिफल / पाथिभरा माताले हामी गरुन हेर्नुहोस तपाइको आजको राशिफल
पाथिभरा माताले हामी गरुन हेर्नुहोस तपाइको आजको राशिफल
admin August 11, 2021	राशिफल Leaveacomment 89 Views
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज ७ गते बिहिबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेन्रुहोस राशिफल
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज ५ गते मंगलबार, तपाई को भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
पढाई लेखाईमा फितलो उपस्थितिले गर्दा अरु भन्दा पछि परिने सम्भावना रहेको छ । सन्तान तथा छोराछोरिले तपाईको काममा आंशिक सहयोग गर्नेछन् । बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो क्षमता प्रदशन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने सोचेजस्तो पारिश्रमिक नपाउँदा मन खिन्न हुनेछ । साझको समय राम्रो रहेकोले प्रतिस्पर्धामा तपाईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ ।
व्यापार व्यावसाय तथा उद्योगमा लगानि गरि आम्दानि बढाउन सकिनेछ भने व्यावसायकै सन्द्रर्भमा छोटो दुरिको यात्रा गर्न सकिनेछ । दाजुभाई तथा छिमेमबाट तपाईले सोचेभन्दा बढि सहयोग पाईने हुदा मन प्रफुल्लित हुनेछ । अदालतबाट हुने निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउनेछ । आट तथा पराक्रम बढेर जाने हुनाले शाहशिलो काम गर्न जोस आउनेछ । साझपख समय मध्ययम रहेकोल माया प्रेममा नजिक हुन सकिनेछ ।
बोलिको प्रभाव बढ्ने भए पनि अरुको बारेमा अनाबस्यक टिका टिप्पणी गर्नाले आफ्नो साख गुम्न सक्छ । पढाई लेखाईमा समय दिएपनि ध्यान नदिदा अरुभन्दा पछि परिनेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउन सक्छ । कुटुम्ब तथा आफन्तहरुबिच घरायसि कुरामा राय बाजिनेछ । साझमा छोटो दुरिको यात्राको तय हुनेछ ।
खर्च अभावले हातमा आईसकेको काम रोकिनेछ भने व्यापार व्यावसायमा मन्दि आउनाले खल्ति रित्तिनेछ । आफन्त तथा अग्रजहरु सँग सानो सानो बिषयमा बिवाद सिर्जना हुने योग रहेकोछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउने तथा खर्च बढ्ने योग रहेकोछ ख्याल गर्नुहोला । समस्या पर्दा सहयोग गर्नेहरु कमै भेटिनेछन् । साझको समय राम्रो रहेकोले आार्थिक क्षेत्र बलियो हुनेछ ।
पढाई लेखाईमा भनेजस्तो नतिजा हात लाग्नेछ भने नया ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जाने तथा दाम्पत्य सुखले मन प्रफुलित हुनेछ । सानो लगानिबाट भनेजस्तो प्रतिफल प्राप्त हुदा आर्थिक अवस्था सुदृड हुनेछ । पुराना कामहरु फत्ते हुने तथा नया काम आउने हुदा दैनिक व्यास्त जस्तै रहनेछ । साझको समयमा लामो दुरिको यात्राको तय हुनेछ ।
कार्यक्षेत्रमा तपाईको निर्णको चर्को बिरोध हुनसक्छ अलि बढि ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यावसायमा भनेजस्तो नाँफा कमाउँन बढिनै समय खर्चिनु पर्नेछ । परिवार तथा आफन्तजन लाई समय दिन नसक्दा मनमुटाबको अवस्था सिर्जना हुँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । साझको समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जानेछ । राजनीति तथा सामाजिक काममा जनताको गतिलो समर्थन पाईनेछ ।
बिभिन्न अवसर आउने तथा स्रोत साभन जुट्नाले महत्वपुर्ण कामहरु समयमानै फत्ते गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानि बढाई मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ भने मिठास बोलिको माध्ययमबाट अरुलाई प्रभावमा पारेर काम लिन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउदै प्रतिष्पर्धिहरुलाई उछिन्न सकिनेछ । साझपख भौतिक सम्पतीको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
Previous नौ करोडमा बानेश्वरमा सिनेमा हल खोल्दै दीपक–दीपा
Next अटोमा घुम्न जाँदा श्रीमतीको निधन, श्रीमानसहित ३ घाइते
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असोज २ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ सेप्टेम्बर १८ …